ISAHLUKO 12: IMITHETHO YEZITHOMBE - I-Geofumed
ISAHLUKO 12: Ukunqongophala parametric
Xa usebenzisa reference into sokugcina okanye iziko, umzekelo, eneneni yintoni sisenza kukuba ukunyanzela into entsha ukwabelana ingongoma nomnye geometry into azotywe. Ukuba sisebenzisa njengokubhekisa "Umfuziselo" okanye "nkqo" Kunjalo, siya zinyanzela eli lungiselelo zejometri yenjongosenzi isalamane omtsha komnye, ukuze ukuba akukho nqo okanye nkqo, ngokutsho kwityala naphakathi kwezinye iindlela, into entsha alikwazi ku dalwa
"Iimimiselo zeParametric" ingabonwa njengendweliso yombono ofanayo okhuthaza ukubhekisela kwizinto. Ukwahlukana kukuba ilungiselelo lejometri elisekwayo liyimfuneko yokuba into entsha ihambelane ngokusisigxina, okanye kunoko, njengemithintelo.
Ngaloo ndlela, ukuba sibeka umgca njengendlela yokujonga enye into, ngoko kungakhathaliseki ukuba sinokuguqula loo mnye umgca, into enokuthintela imele ihlale isingqinisiso.
Kucacile, ukusetyenziswa kwesithintelo kunengqiqo xa sitshintsha into. Oko kukuthi, ngaphandle kwemingcele singenza nayiphi na inguqu kumzobo, kodwa njengoko zikhona, utshintsho olunokwenzeka lunqunyelwe. Ukuba sifuna ukuba ne AutoCAD into ekhona ofuna ukuba akukho tshintsho, ngoko oko kwenza akukho ingqiqo ukuze isicelo esinjalo isithintelo umzobo parametric. Ukuba, kwelinye icala, benza umzobo isakhiwo okanye inxalenye mechanical ogama shape're lisakhangela yokugqibela, ngoko nezithintelo parametric ziluncedo kuba ukuvumela ukuba ukulondoloza fixed ezo ubudlelwane phakathi kwezinto, okanye imilinganiselo, yethu Uyilo lu fanele lu thobele.
Faka enye indlela: imimiselo ye-parametric iyisisityebi esikhulu semisebenzi yoyilo, kuba ivumela ukuba silungise ezo zinto ezinobungakanani okanye ubudlelwane be-geometric kufuneka zihlale zihlala.
Kukho iintlobo ezimbini zezithintelo ze-parametric: iJometri neCota. I lokuqala elikhankanyiweyo yokunqongophala zejiyometri zezinto (nkqo, ngaxeshanye, nkqo, njalo-njalo), lo gama izithintelo mbini ebekwe ledayimenshini (imigama, engile kunye radii kunye ixabiso ethile). Umzekelo, umgca kufuneka ube ngamaqumrhu e-100 okanye imigca emibini kufuneka ihlale i-angle ye-47 ° degrees. Kwelinye icala, izithintelo ebotshiwe lungabonakaliswa njengoko zibalo, ukuze nenkalo yokugqibela into isekelwe phezu kwezi zithethe zixabisekileyo (Womendo okanye rhoqo) lenxaki sakhiwa.
Ekubeni siza kufunda izixhobo zokuhlela izinto kwiSahluko se-16, siya kubona apha indlela yokudala, ukujonga nokulawula imithintelo ye-parametric, kodwa siya kubuyela kubo kweso sahluko.
Post edlulileyo«Edlulileyo ISAHLUKO 11: YOKULANDELELA polar
Post Next 12.1 izithintelo zejiyometriOkulandelayo "